Yakanakisa Inotakurika Mota Inokurumidza Kusimudza Rubber Pad Mugadziri uye Fekitori | Tonghe
Mota dzine clip-dzakasungwa njanji dzinoiswa pane zvakajairika rabha mapedhi dzinogona kukwenya kana kutopatsanura marabha mapedhi. Panguva imwecheteyo, zvakare zvakare nyore kukonzera kukuvara kumatanda ehurefu pane yakasanganiswa mota yemotokari.
Chinhu chikuru cheLRP-1 Rubber Pad ndeye polyurethane. Iyo yepamusoro yakaoma, isingagadziriswe nemafuta uye haina kupisa ngura. Iyo yakagadzirirwa neiyo yakatwasuka uye yakatwasuka yemuchinjikwa-yakatemwa maburi. Inogona kuve yakamisikidzwa yakatwasuka kana yakatwasuka zvinoenderana nemhando dzakasiyana. Iyo clip clip yakasunganidzwa track yakadzika mukati meyakacheka-yakatemwa groove kuti inyatso tsigira iyo. Simudza siketi yemota kuti ubvise kumanikidzwa kwetambo yakasungirirwa paRubber Pad, upe rutsigiro rwakawedzerwa kumota, kudzivirira mafuta emafuta kubva mukukanganisa iyo pad, uye anogona kuwedzera zvakanyanya hupenyu hwehupenyu hwepabha. Panguva imwecheteyo, iyo yakasungwa-yakasungwa track yakavezwa kune mota. Iyo zvakare yakanaka kwazvo dziviriro uye inovandudza kuchengetedzeka kwekusimudza.
Pashure: Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Mudhudhudhu Simudza Kit
Zvadaro: Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Wall Hanger Seta
Mota Inokurumidza Simudza Rubha Pad
Imwe chete post ingroud kusimudza L2800 (A) yakagadzirirwa ...
Series Nyowani simba mota bhatiri simudza trolley ...
Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza,